Isosi emnandi yesimichurri | Ukupheka kweKhitshi
Isosi esimnandi yesimichurri
UHana mitchell | | Cuisine yaseArgentina, Iiresiphi ezilula, I-Salsas
Phila Argentina! (kunye neerosi zabo, ii-empanadas kunye neesosi). Namhlanje ndabelana nawe ngento, ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona nto ndiyithandayo yokunxiba isosi ehlabathini: isosi emnandi yesimichurri. Ubungangamsha benyama yaseArgentina kunye neerosti zayo zaziwa kakuhle, kodwa asinakukhanyela ukuba emva kwenyama enkulu ... isosi ekuphakameni kwayo kubalulekile. Lo ngumthendeleko wesinongo kunye ne-nuances efanelekileyo yokunxiba phantse naluphi na uhlobo lwesitya, nditsho neesandwich (Ndifunga eyona intle endakha ndanayo).
Akunyanzelekanga ukuba usete i-grill ekhaya ukonwabele oku kumnandi. Ngexesha elizayo xa usenza inyama eyosiweyo, intlanzi, ukutya kwaselwandle okanye imifuno, zama ukuhamba nezitya kunye noku chimichurri ukuveza. YONWABE
Akukho asado yaseArgentina ixabisa ityuwa yayo okanye ibhaybheythi ephumeleleyo ngaphandle kwale chimichurri ecacileyo yesosi. Ngale recipe, uya kufumana isinxibo esifanelekileyo kwimifuno kunye nemifuno yakho ngaphantsi kwemizuzu emi-5.
Uhlobo lweRipeipe: I-Salsas
Ixesha lokulungiselela: 3 m
Ixesha lokupheka: 1 m
Ixesha elipheleleyo: 4 m
1 isipha esikhulu separsley (ukufumana ikomityi kunye nesiqingatha samagqabi atyunjiweyo).
Iipunipoli ezi-6 zeoyile eyongezelelweyo ye-olive
Iipuniwe ezi-3 zeviniga emhlophe
5 amagqabi e-basil
Sisika amagqabi eparsley de sade sifumane inani lekomityi enesiqingatha.
Sityumza ii-clove ezi-4 zegalikhi.
Gweba isilili de ifike kwisixa sekhofi yekhofi.
Sidibanisa zonke izithako ezikuluhlu kwi-blender imizuzwana embalwa, ngaphandle kokuvumela umxube ukuba ugijime kakhulu.
Sigcina kwifriji kwaye masiyiyeke iphumle ubuncinci iyure ngaphambi kokuphaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yaseArgentina » Isosi esimnandi yesimichurri
Mynor ulloa sitsho
Enkosi ngeresiphi, into endinomdla kuyo yonke inyama, imibuliso, emnandi kakhulu
Phendula u-Mynor Ulloa
UHana mitchell sitsho
Enkosi kuwe Mynor!
Obunye bobuthathaka bam ziisosi! Ke naka ingqalelo kwiintsuku zenyanga nganye, kuba enye inokuwela kungekudala!
Phendula uHana Mitchell
Ikofu kunye nesonka kunye neoyile kunye neswekile, isidlo sakusasa saseAndalusi